Dissatisfaction छ - जीवन भर हामी धेरै सँगसँगै एक गुणवत्ता, निरन्तर हाम्रो अस्तित्व विषाक्तता र पदोन्नति सहित धेरै उद्देश्य, को कार्यान्वयन संग interfering, र असल मान्छे को मन जित्न। र कम्तिमा एक व्यक्ति फेला पार्न चाहे आफ्नो गुणहरू संग पूर्ण सन्तुष्ट हुन सक्छ?
त्यसैले झन् राम्रो बन्न कसरी myl छन् हामीलाई कुनै पनि भ्रमण। तपाईं जीवन को लागि एक विश्वासी साथी बन्न छ जो एक र मात्र, लागि, उहाँलाई लागि राम्रो हुन चाहनुहुन्छ, विशेष गरी यदि ...
खैर, बारे राम्रो बन्न कसरी, सायद यो विचार लायक छ। तर कसरी? यो प्रत्येक विशेष केटी लागि अर्थ हुन सक्छ कसरी र के? र - जसको लागि - यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो?
पहिले तपाईं ठ्याक्कै निर्धारण गर्न आवश्यक छ: तर यो आवश्यक छ? आखिर, आफै गर्न मनोवृत्ति धेरै शायद पूर्ण पर्याप्त। आफूलाई भन्न सक्ने कम्तिमा एक व्यक्ति फेला पार्न प्रयास - खुल्लमखुल्ला र इमानदार: हो, म आफैलाई प्रेम। तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ भनेर एक बाइबलीय सत्य हो। यो तपाईं आफैलाई प्रेम गर्न आवश्यक अर्थ, र यो धेरै गाह्रो छ। तर यो snobby गर्न धमकना सक्दैन!
आफूलाई मा, हेर निष्पक्ष र निष्पक्ष, यो तपाईं अनावश्यक भावना बिना तिनीहरूको बलियो पक्ष र कमजोरी हेर्न र तिनीहरूलाई धेरै पर्याप्त मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ। यो जान्न अझ राम्रो, कसरी सुधार गर्न कसरी बन्न क्रममा कदम हो।
कडाई बोल्ने, हामी विशेष कसैलाई संग तुलना मा सबै भन्दा राम्रो बन्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र यो हो र कदम पूर्णता हासिल गर्न अर्को ठोस निर्भर गर्न सक्नुहुन्छ। एक केटी कार्यालय मा अर्को टेबलमा बसिरहेको राम्रो सहकर्मी बन्न इच्छा छ भने, एउटा कुरा हो, तर तपाईं खेल आफ्नो उपलब्धिहरू सुधार गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्छन् भने - हो एकदम अर्को। तर कुनै पनि मामला मा लक्ष्य कस्तो आफूलाई लागि निर्धारण र हरेक तरिकामा यसको लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ। र बस - एक राम्रो केटी हुन कसरी? यो प्रश्न र जवान बालिका को बहुमत फिक्री, तर केही मान्छे राम्रो बन्न कसरी महसुस।
एक कि हरेक केटी विशेष गरी पूर्णता लागि प्रयास भने, हुनुपर्छ मुख्य गुणहरू को - यो विश्वास भरिएको छ। तपाईंले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो भनेर पनि भन्न सक्छ! आफूलाई र आफ्नो क्षमता र विश्वास कुनै पनि केटी उसलाई, त्यो एक जीवनकालमा प्रतीक्षा गर्न सक्छन्, जसलाई उनको प्रेमी लागि सबै भन्दा राम्रो हुन मदत गर्नेछ।
जगाउन आत्म-विश्वास सजिलो छैन, तर यदि यस्तो कुनै निश्चितता, यो विश्वविद्यालय वा कर्मचारी को अनुकूल टीम मा एक समूह हुन कि, समुदाय आफ्नो स्थान पाउन गाह्रो हुनेछ। यहाँ र गइसकेको, हामी धेरै बस भर्चुअल संसारमा जहाँ भर्चुअल समुदाय छन्, र आफ्नो संचार, नयाँ मित्र को ठाउँ पनि नयाँ नाम र नयाँ अनुहार पाउन। खैर, खराब भर्चुअल संसारमा के छ?
आत्म-विश्वास हासिल छ, म कुनै पनि केटी हुन सक्छ कि छैन कम्तिमा ज्ञान। आखिर, जब मुख्य पूर्ण समझदार र चतुर विचारै, बरु भन्दा सरल boltushek खाली-लाग्यौं, सही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ गर्नेहरूलाई मा भर्चुअल संसारमा भुक्तानी ध्यान मा सञ्चार? तर वास्तविक संसारमा नै मानिसहरूले Inhabited, र तिनीहरूले यस्तो कुरा केही मानिसहरू रोमाञ्चक छ हुनत, स्मार्ट र रोचक केटी, छैन संग हावा चलेको र खाली-लाग्यौं च्याट गर्न धेरै रोचक हुनेछ।
त्यसैले तपाईं आफै हुन आफैलाई यो छ आवश्यक प्रेम, के हो? ओह, यो पूर्ण आत्म-विश्वास र रिलायन्स हासिल, र यसरी अरूलाई रोचक बन्न धेरै उपयोगी छ, त्यसैले यसलाई अझ राम्रो छ! चासो को दायरा व्यापक, अरूलाई र मित्र को ठूलो आदर: एक सख्त निर्भरता छ। अधिक रोचक केटी, admirers को ठूलो सर्कल, र पूर्ण बेकारी बनौटको एक मोटी पत्र को अनुहार मा आयातित र उपलब्ध ध्वनि ...
सद्भावना - कि कुनै राम्रो केटी हुन अनुमति दिन्छ अर्को गुण हो। तिनीहरूलाई वरिपरि मानिसहरूलाई सहिष्णुता र दयालु व्यवहार भने, तिनीहरू पनि भनिन्छ मित्रहरू हुन खुसी हुनेछन्। कुनै मामला मा अरूलाई आफ्नो खराब स्वभाव देखाउन पनि आफ्नो दुष्ट अन्य अबरोध गर्न सक्दैन, आवश्यक छैन। मान्छे राम्रो मनोवृत्ति धेरै सस्तो हुन्छ, तर धेरै महंगा अरूले मूल्यवान छ। त्यस्तै, यो कि खाँचोमा परेकाहरूलाई धेरै घेरिएको गर्न सकिन्छ ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ। यो एक राम्रो केटी हुन कसरी मात्र एउटा सानो सुझाव छ।
धेरै जटिल हटाउनु र हामी एक असल र यी गुणहरू विकास भन्ने तथ्यलाई विचार आफ्नो कमीकमजोरी मा "हङ अप" भने, र, विश्वास हासिल गर्न सकिन्छ।
तर सबैभन्दा रोचक - बस परमेश्वर र आउन र उहाँलाई संग सबै सल्लाह लिनुहोस्। उहाँले भन्नेछु।
एक उच्च वृद्धि कसरी बन्न जानकारी को लागि
लगनशील भई लागिरहेमा - यो ... कसरी बच्चाको लगनशील भई लागिरहेमा विकास गर्न?
मर्मान्स्क क्षेत्रीय संग्रहालय: ठेगाना, फोटो
ठोस Vibrator - निर्माण मा प्रयोग
कुकिङ रोल puzaniny
इवान Moskvitin: जीवनी र उपलब्धिहरू